Muhiimadda magaalada Berbera iyo sida uu Qaranka Somaliland uga qatanyay (Qeybta 3-aad),Qalinkii:Iid Xasan Aw Muuse, |
Muhiimadda magaalada Berbera iyo sida uu Qaranka Somaliland uga qatanyay (Qeybta 3-aad),Qalinkii:Iid Xasan Aw Muuse,
Qaybtan amma qormaddan 3-xaad waxa aan kaga hadli doonaa, sidii aan ku balan qaaday, carqaladaha hortaagan mashruuca Berbera Corridor amma guud ahaan in ay Dekedda Berbera noqoto mid kobocda oo casriyaysan.
Aragtiday-du waxa ay tahay in mashruucani 3 cadaw leeyahay, 3-daas cadaw-na kala yihiin:
Dalka aynu jaarka nahay ee Djibouti oo wixi ay awood siyaasadeed amma diplomasiyadeed ay laheyd dul dhigtay ka hortagga in ay dekedda Berbera hana qaado amma guud ahaan-ba qadiyada Somaliland meel marto maadaama ay u arkaan in dantoodu ku jirin in Somaliland noqoto dal daggan oo madax-banaan oo kula tartama strateejiyada dagmo ahaaneed ee Geeska Afrika.
Siyaasi Somalilander ah oo laakiin fikirkiisu amma aragtidiisu tahay Somali-yahan amma Somalist (ka boggo micnaha kalmadan oo faahfaahsan ciwaanka aan Facebook-ga ku leeyahay oo ah Id Hassan Musa), oo markaas ka dhiggan in aanu aaminsanayn in ay jirto amma jiri kartaba dan gaar ah oo dadka reer Somaliland gaar u leeyihiin isla markaasna ka madhan fahamka falsafada Dawlad Qarameedka amma concept-ka Nation State.
Karti, aqoon darro iyo aragti (vision) la’aan haysata siyaasiyiinta Somaliland oo markaas keenaysa in ay awoodi waayaan in ay heshiisyo wakhti dheer ah oo qaranka raad dhaxal gal ah ku yeesha si kalsooni ku jirto ula gallaan dalal amma shirkado.
Dal-wadaagayaal, 3-dan cadaw way iskaashadaan oo hadaan cadawga 2-aad iyo 3-xaad aanu jirin, cadawga 1-baad siyaasadiisu may hirgasheen.
Sanadku wuxu ahaa 1999-kii markii madaxweynihii dalka Jabuuti (Djibouti) Hassan Gouled Abtidoon geeriyooday ee uu madaxweyne Ismail Omar Guelleh dhaxlay. Madaxweyne Guelleh wuxu la kulmay, isla markaasna si fiican ulla socday maadaama uu hoggaanka dalkaas ku lug lahaa, xidhiidh sokeeye oo isfaham ka muuqday oo ka dhex abuurmayay dalalka Somaliland iyo Ethiopia. Wuxu isla markiiba u guntaday in uu xidhiidhkaas iyo daneynta Ethiopia ee Berbera u quus gooyo.
Madaxweyne Guelleh wuxu qaylo dhaan kula dhex dhacay hogaamiye kooxeedyadii Somalia oo uu markaas ku mideeyay in laga hortaggo in Ethiopia dekedda Berbera qaadato oo markaas la dhiso dawlad “Soomaaliyeed” oo aqoonsi caalamiya haysata oo is-hortaagi karta xidhiidhka xoogaysanayay ee Somaliland iyo Ethiopia oo horseedi kara adkaanta amma xididaysiga Qaranimadda Somaliland. Sidoo kale markuu madaxweynihii wakhtigaas ee Somaliland marxuum Cigaal (AHU) ku qancin kari waayay baybaysigii “Soomaali-nimmo”, wuxu u waydaartay madax dhaqameedkii uu ku tuhmayay midaw u hiilin (unionist) oo markaas taggay shirkii Carta ee uu Guelleh odayga ka ahaa. Waxa kaloo uu madaxweyne Guelleh shirkaas ku marti qaaday oo markhaati ka noqda yidhi, sidii caadada shirarka Somalia loo qabanayo u aheyd, ururada caalamiga ah sida UN, EU, AU, OIC iyo Arab League. Wuxu aad ugu dadaalay madaxweyne Guelleh in dawladii Carta lagu dhisayay ay qeyb libaax ku yeeshaan dadka reer Somaliland si dawladnimada Somaliland loogu kala jabbo oo dagaal hubeysani dib uga bilawdo dalkeena Somaliland gudihiisa. Dawladii Carta waxa Raisal-wasaare iyo wasiir ariimo dibadeed-ba ka noqday rag reer Somaliland ah, madaxweynihiina waxa qaatay Somalia. Madaxweyne Guelleh wuxu shirka gudihiisii ku xasiliyay oo uu iskugu mashxaraday in beeshii caalamkana taageero siyaasadeed uga hellay dawladii uu dhisay oo dalalkii iyo ururadii kasoo qayb gallay oo dhammi waxa ay balan qaadeen in ay taageeri doonaan dawlada cusub ee Somalia, taasina waxa ay dhacday September 2000.
Dabaal-daggi Carta iyo farxaddii madaxweyne Guelleh waxa ka daba taggay madaxweynihii Somaliland ka tallin jiray wakhtigaas ee Cigaal (AHU) oo aan anigu aaminsanay in shirkaa Carta badilay mawqifkiisii ku aadanaa dalkii kala taggay ee Jamhuuriyada Soomaalida amma Somali Republic la odhan jiray. Waxa kaloo uu shirkaasi badilay fikirkii Cigaal ee ku aadanaa guud ahaan Somali-nimmo iyo dan Soomaaliyeed oo wuxu u xuub siibtay madaxweyne Cigaal (AHU) in uu noqdo Statesman Somaliland noqotay abtirsiintiisa kowaad.
Shirkii Carta ka dib, wuxu madaxweyne Cigaal qaaday dagaal diplomaasiyadeed oo uu kala hortaggay dawladii Carta lagu dhisay iyo waliba dalka Djibouti, oo isla bishii October ee 2000 wuxu socdaal ku taggay dalka Ethiopia oo uu kula kulmay Raisal wasaarihii dalkaas ee Meles Zenawi isagoo wasiirkiisii ariimaha dibadana, Mudane Fagadhe (AHU), socdaalkaas dabadii u diray dalalka Galbeedka (The West: USA and Europe). Guulihii diplomaasiyadeed ee socdaalkaas uu Cigaal kusoo hooyay waxa aan si faahfaahsan kaga warami doonaa qoraalka aan kusoo bandhiggi doono taariikhda xidhiidhka cusub ee Somaliland iyo Ethiopia-e, wuxu madaxweyne Cigaal xooga saaray wakhtigaas in uu sii xoojiyo xidhiidhka dhaqaale ee 2-da dal isla markaana Meles Zenawi ku qanciyo in uu qaadaco dawladii Carta. Waxa kaloo uu madaxweyne Cigaal si aan qarsoodi laheyn ugu bilaabay dagaal diplomaasiyadeed dalka Djibouti iyo madaxweynihiisa oo isagoo u waramaya BBC Africa ayaa wuxu yidhi: “Wadankaa yar ee Djibouti ayaa ku hamiyaya in uu Geeska Afrika oo dhan u talliyo iyo in uu ku dirqiyo ra’yigiisa wadammo kun jeer ka waawayn (That little country, Djibouti, aspires to rule the whole of the Horn of Africa. It aspires to have its own opinions and wishes imposed upon countries that are 1,000 times bigger than it”, source: BBC Africa).
Mudadii u dhaxaysay 2000 ilaa iyo 2002 waxa sii xoogaystay xidhiidhkii u dhaxeeyay Somaliland iyo Ethiopia, isla markaana waxa dib usoo ifbaxday daneyntii dalka France ee wadankeena Somaliland oo runtii bilaabantay 1991-kiiba markii dalkeenu dib u dhashay. Sidaan hore ugu balan-qaaday qoraal gooni ah ayaan ka diyaarin doonaa taariikhda xidhiidhka Somaliland iyo France ee waxa aan halkan ku xusi oo qudha in mudadaas 2-da sanadood ahayd ee geeridii Cigaal ka horaysay ay heshiis-ya dhawr ah oo xagga Fransiiska ka socda soo guuxayeen. Heshiisyadaa waxa ka mid ahaa khuburadii (Archaeologist) ka socday Jaamacadda Montpellier oo ah kuwii hellay Laas Geel, in School Fransiis ah (Lycée Français) laga dhiso Hargeisa, in Bangiga BNP (Bank Nationale de Paris) uu laan (branch) ganacsi ka furto Hargeisa, iyo shirkadda Bolloré oo bilawday in ay daneyso dekedda Berbera.
Geeridii Cigaal ka dib, Djibouti waxa ay isla markiiba bilawday in ay dib usoo celliso xidhiidhkii aan dheeli tirnayn ee ay inala lahayd oo waxa ay wafti Baarlamanka Djibouti ka socday usoo dirtay, iyadoo aan wax xidhiidh ah lasoo samaynin dawlada Somaliland, aaskii madaxweyne Cigaal. Ficilkaas waxa go’aan haybad qaranimmo ka muuqato ku hor istaagay madaxweynihii wakhtigaas ee Daahir Riyaale Kaahin iyo intii kula talisay oo waxa loo diiday in ay soo fadhiisato madaarka Berbera diyaaradii siday waftigaas. Dalka Djibouti go’aanka dawlada Somaliland qaaday kumu noqon mid ay kaga go’aan Somaliland maadaama danta ay xidhiidhkaas in lasoo celiyo ay ka laahaayeen ayaa kaga wayneed wafti reer Djibouti ah oo hawada lagasoo celiyo oo waxa ay go’aankaa kasoo qaadeen uun in tijaabadii ugu horaysay ee ay Somaliland meeqaamkeeda ku yasayeen ay suuroobi wayday.
Iyadoo adeegsanaysa cadawga 2-aad iyo ka 3-aad, waxa Djibouti u suura gashay in ay dib Somaliland ugu hesho fursad ay danaheeda kaga fushato. Inkastoo madaxweyne Riyaale aanu Djibouti ka dhiggan saaxibkiisa kowaad, hadana kamay madhnayn madaxda dalka iyo xod-xodashadooda. Djibouti waxa ay gaadhay heer ay xisbiyada Qaranka Somaliland siyaasadooda raadayso oo haddii ay xukumaddii Rayaale u arki wayday in ay wax badan marsiin karaan, ay markaas mucaaridka uga wareegto. Isagoo markaas ka faa’idaysanaya maqiiqnaantii xisbiga Kulmiye iyo in uu xeelad walboo tallada dalka ay ku qabanayaan isticmaalaan, ayaa waxa uu Ismail Omar Guelleh xidhiidh dhaw la yeeshay markii doorashadu soo dhawaatay xisbigaas oo uu u arkayay ka ugu dhaw ee UDUB badili karaayay. Waxa xusid mudan in hadana intii uu Daahir Riyaale Kaahin hayay tallada dalka uu Ismail Omar Guelleh ku guulaystay in uu hakiyo, isagoo xeelad walboo suuragal ah isticmaalaya, daneyntii Bolloré ee Dekedda Berbera iyo mashaariicdii kalee France ka socotay-ba.
Hadaba Kulmiye markuu tallada dalka qabtay siduu ka yeelay mashruucii Berbera Corridor iyo waliba xidhiidhkii aynu Djibouti la lahayn?
Su’aashaas jawaabteeda waxa aan ku falanqayn doonaa qeybta 4-aad ee qoraalkeygan.
Wa bilaahi tawfiiq,